2 Samuel 17 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
17 Ɛnna Ahitofel ka kyerɛɛ Absalom sɛ: “Mesrɛ wo, ma minyi mmarima mpem dumien na yɛnsɔre nkotiw Dawid anadwo yi.+ 2 Mɛkɔ akɔto no sɛ wabrɛ na ne nsa abien nyinaa mu ahoɔden asa,+ na mɛma ne ho apopo, na nnipa a wɔwɔ ne ho nyinaa beguan, na ɛka ɔhene nkutoo a, makum no.+ 3 Na mede ɔman no nyinaa bɛsan abrɛ wo. Sɛ wo nsa ka onipa a worehwehwɛ no no a, woanya ɔman no nyinaa, na ɔman no nyinaa benya asomdwoe.” 4 Ná asɛm no teɛ wɔ Absalom+ ne Israel mpanyimfo nyinaa ani so. 5 Nanso Absalom kae sɛ: “Momfrɛ Arkini Husai+ mmra na yentie nea ɔno nso wɔ ka.” 6 Enti Husai baa Absalom nkyɛn. Na Absalom ka kyerɛɛ no sɛ: “Asɛm a Ahitofel aka ni. Yɛnyɛ nea waka no anaa? Sɛ ɛnte saa a, wo nso ka bi.” 7 Ɛnna Husai ka kyerɛɛ Absalom sɛ: “Ahitofel afotu a ɔde ama saa bere yi de, enye!”+ 8 Na Husai ka kaa ho sɛ: “Wo ara wunim wo papa ne ne mmarima no sɛ wɔyɛ nnɔmmarima,+ na wɔn ani abere+ sɛ osisibere a ne mma ayera wɔ wuram;+ wo papa yɛ ɔkofo,+ enti ɔrenna ɔmanfo no mu anadwo yi. 9 Hwɛ! Sesɛɛ wakohintaw+ amoa bi mu anaa baabi foforo, na sɛ ɛba sɛ ɔno di kan tow hyɛ wɔn so a, nkurɔfo bɛte akɔka sɛ, ‘Nnipa a wodi Absalom akyi no adi nkogu!’ 10 Ɛba saa a, ɔbarima kokodurufo a ne koma te sɛ gyata+ koma mpo bɛyɛ mmerɛw;+ Israel nyinaa nim sɛ wo papa yɛ dɔmmarima,+ na saa na mmarima akokodurufo a wɔka ne ho no nso te.+ 11 Enti m’afotu ne sɛ: Ma wɔmmoaboa Israel nyinaa ano, efi Dan kosi Beer-Seba,+ sɛ́ mpoano anhwea dodow,+ na wɔmmra wo nkyɛn, na w’ankasa kɔ ɔko no.+ 12 Ma yɛnkɔ no so wɔ baabi a yebehu no,+ na yɛntow nhyɛ no so sɛnea obosu+ tɔ gu fam no, na ɔne mmarima a wɔka ne ho no biako mpo renka. 13 Na sɛ oguan kɔhyɛ kurow bi mu nso a, Israel nyinaa bɛfa nhama akɔ kurow no mu, na yɛatwe akogu subon no mu akosi sɛ ɔbo biako mpo renka hɔ.”+ 14 Ɛnna Absalom ne Israel mmarima nyinaa kae sɛ: “Arkini Husai afotu no ye+ sen Ahitofel afotu no!” Ná Ahitofel afotu no ye,+ nanso Yehowa na ɔhyɛe+ sɛ wɔnsɛe afotu no+ sɛnea ɛbɛyɛ a Yehowa de mmusu+ bɛba Absalom so. 15 Akyiri yi, Husai kɔka kyerɛɛ ɔsɔfo Sadok+ ne ɔsɔfo Abiatar sɛ: “Sɛɛ ne sɛɛ na Ahitofel tuu Absalom ne Israel mpanyimfo no fo, na sɛɛ ne sɛɛ na me nso mituu no fo. 16 Enti afei monsoma ntɛm nkɔka nkyerɛ Dawid+ sɛ, ‘Ntena sare so tataw no so anadwo yi, twa mmom na twa kɔ,+ anyɛ saa a wɔbɛmemene+ ɔhene ne nnipa a wɔka ne ho no nyinaa.’” 17 Yonatan+ ne Ahimahas+ de, na wogyinagyina En-Rogel,+ na abaawa bi kɔkaa asɛm no kyerɛɛ wɔn. Ɛnna wɔn nso siim, efisɛ na ɛsɛ sɛ wɔkɔka kyerɛ Ɔhene Dawid; ná wɔrentumi nkɔ kurow no mu, efisɛ nkurɔfo behu wɔn. 18 Nanso aberante bi huu wɔn, na ɔkɔka kyerɛɛ Absalom. Enti wɔn baanu de mmirika kɔɔ ɔbarima bi fie wɔ Bahurim;+ ná ɔwɔ abura wɔ n’adiwo, na wɔkɔhyɛɛ mu. 19 Ɛnna ɔbarima no yere faa nkataso de kataa abura no so, na ɔde awi a wɔasiw guguu so,+ na obiara anhu ho hwee. 20 Na Absalom nkoa baa ɔbea no nkyɛn wɔ fie hɔ, na wobisaa no sɛ: “Ɛhe na Ahimahas ne Yonatan wɔ?” Ɛnna ɔbea no buae sɛ: “Wɔatwam ha kɔ nsu no ho.”+ Na wɔhwehwɛɛ wɔn ara, nanso wɔanhu wɔn,+ enti wɔsan kɔɔ Yerusalem. 21 Ɛbae sɛ bere a wofi hɔ kɔe no, wofii abura no mu, na wosiim kɔka kyerɛɛ Ɔhene Dawid. Wɔka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Monsɔre, na monyɛ ntɛm nkotwa asu no, na ɛfo+ a Ahitofel atu wɔ mo ho ni.” 22 Ɛhɔ ara na Dawid sɔree, ɔne nnipa a wɔka ne ho nyinaa, na wokotwaa Yordan kosii sɛ anim tetew+ anɔpa, na wɔn mu biako mpo anka a wantwa Yordan. 23 Ahitofel de, bere a ohui sɛ wɔamfa n’afotu anyɛ adwuma+ no, ɔhyehyɛɛ afurum, na ɔsɔre siim kɔɔ ne fie wɔ ne kurom.+ Ɛnna ɔhyɛɛ ne fie nsamansew,+ na ɔsɛn+ ne ho wui.+ Na wosiee+ no wɔ n’agyanom amusiei. 24 Dawid kɔɔ Mahanaim,+ na Absalom nso kotwaa Yordan, ɔne Israel mmarima a wɔka ne ho nyinaa. 25 Amasa+ na Absalom de no sii Yoab+ ananmu yɛɛ no asraafo so panyin. Amasa yɛ Israelni barima bi a wɔfrɛ no Yitra ba.+ Yitra yi na ɔkɔɔ Nahas ba Abigail+ a ɔyɛ Yoab maame Seruia nuabea ho no. 26 Na Israel ne Absalom kɔbɔɔ nsra Gilead+ asase so. 27 Bere a Dawid beduu Mahanaim no, ɛhɔ ara na Nahas a ofi Ammonfo+ kurow Raba+ mu ba Sobi ne Amiel+ a ofi Lo-Debar ba Makir+ ne Gileadni Basilai+ a ofi Rogelim+ 28 de mpa ne asɛn ne nkuku ne awi ne atoko ne esiam+ ne nkyewe+ ne apatram+ ne asedua+ ne aburow a wɔakyew, 29 ne ɛwo+ ne bɔta+ ne nguan ne nufusu a ada brɛɛ Dawid ne nnipa a wɔka ne ho no sɛ wonni,+ efisɛ wɔkae sɛ: “Ɔkɔm de nnipa no, na wɔabrɛbrɛ na sukɔm ade wɔn sare yi so.”+